Epinara | Tantsaha anaty aterneto | January 2020
Mifidy ny karazana spinach tsara indrindra izahay
Spinach dia zavamaniry isan-taona vokatry ny fianakaviana Amaranth, ary ao amin'ny sokajin-taona tranainy dia ny orinasa Mare. Mety hahatratra haavo 35 ka hatramin'ny 40 santimetatra ny gidro. Tamin'ny volana Jolay, voninkazo kely maitso dia manomboka eo amin'ny zavamaniry, izay mivadika amin'ny voankazo toy ny voanjo.
Fomba fanangonana spinach ho an'ny ririnina
Ireo manam-pahaizana amin'ny sehatry ny sakafo dia manome fahazoan-dàlana ao anatin'izany ny spinach amin'ny dianao ho fitaovana hitehirizana ny tanora sy hampiroborobo ny fahasalamana. Ny zavamaniry dia fivarotan-tsakafo tsotra fotsiny izay manampy ny vatana hananana 100%. Na izany aza, raha amin'ny fahavaratra dia tsy zava-manahirana ny mahita zozam-boasazy, ny raviny vaovao amin'ny ririnina dia tsy fahita firy.
Ny gidro amam-bovoka ary ny endriny mihamitombo
Tena mahaliana sy, indrindra indrindra fa ny zavamaniry ilaina. Ny anarany siantifika dia maria, izay manana tandroka maromaro, saingy antsoina koa hoe spinach-romaola tsotra izy io. Mandritra izany fotoana izany dia toa toy ny spinach, strawberry ary raspberry. Ny lazan'ny zavamaniry dia lasa fijery ivelany sy tombontsoa lehibe ho an'ny vatan'olombelona.
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Epinara